Nei vashanyi vane mutoro vachifanira kushanyira Honduras, El Salvador, Dominican Republic neGuatemala
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Honduras Breaking News » Nei vashanyi vane mutoro vachifanira kushanyira Honduras, El Salvador, Dominican Republic neGuatemala
Kuputsa Kufamba Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Guatemala Kuputsa Nhau • Honduras Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vatariri vane mutoro vanofanirwa kutarisa kuenda nekutsigira Honduras, El Salvador, Dominican Republic neGuatemala kuburikidza nekushanya. Vashanyi vane mutoro vanofanirwa kutarisa nokungwarira kana vachitsigira mamwe maCaribbean neLatin America Nyika. Iyi meseji inoenderana nenguva nekutanga kweWTTC (World Travel uye Tourism Summit) yave kuda kutanga muBuenos Aires, Argentina.
Kunze kweHonduras, El Salvador, Dominican Republic neGuatemala, dzimwe nyika dzeLatin America neCaribbean dziri kunetsekana kufambira mberi pakurwisa kuroorwa kwevana kana zvichienzaniswa nenyika dziri muSouth Asia, sekureva kwemushumo weUNICEF.
Nepo dzimwe nzvimbo dzepasi dzakaderedza zviitiko zvewanano yevana, "izvi hazvina kudaro mudunhu medu, umo mukadzi mumwe chete pavakadzi vari kuroorwa makore gumi nemasere asati asvika," anodaro mukuru weUNICEF, Maria Cristina Perceval.
Latin America neCaribbean yave ndiyo yega nharaunda pasi rose uko michato yevana isina kudzikira zvakanyanya mumakore gumi apfuura, sekureva kwemushumo uchangobva kuitwa ne Sangano reUN revana (UNICEF).
"Tiri kuona kufambira mberi chaiko mune mamwe mativi epasi kuchengetedza vasikana kubva mukuroorwa kwevana," akadaro Panama City Maria Cristina Perceval, mukuru weUnicef ​​yeLatin America neCaribbean. "Zvisinei, izvi hazvisizvo zvakaitika mudunhu medu, umo mukadzi mumwe chete pavanhu vana ari kuroorwa asati asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa."
Nekuda kweizvozvo, vasikana ava havabatsirwe nemikana yakafanana yehupenyu mukati nepakati nepakati, nenjodzi yakakwira ye mhirizhonga pabonde, nhumbu dzichiri diki, kusiira chikoro panzira, mukuwedzera nekusasarudzika kubva kune vezera ravo, akawedzera Perceval.
Nyika ina chete mudunhu iri dzakarambidza kuroorwa kwevana, ne Honduras, El Salvador, Dominican Republic neGuatemala.
Muna Kukadzi, imwezve Unicef ​​mushumo yakayambira kuti pakanga pasina kukwana kwakakwana mukudzora yakakwira kubata pamuviri kwevachiri kuyaruka mitengo muLatin America neCaribbean: kunyangwe hazvo huwandu hwepamuviri hwevechidiki "hwakaderera zvishoma" mumakumi matatu emakore apfuura, dunhu iri rine rechipiri-repamusoro pasi rose.
Huwandu hwevasikana vakaroorwa muhudiki hwakamira pa Mamirioni gumi nemaviri pagore uye pasina mapurogiramu eruzhinji achigadzirisa nyaya iyi, kupfuura Mamirioni zana nemakumi mashanu evasikana vanozoroora vasati vasvitsa makore gumi nemasere kusvika gore ra150, akawana mushumo.
Pasi rose, mumwe chete pavatanhatu vechidiki (vane makore 15 kusvika 19) parizvino vakaroorwa kana mubatanidzwa. West neCentral Africa ine chikamu chepamusoro chevachiri kuyaruka vakaroora (27 muzana), ichiteverwa neEastern neSouthern Africa (20 muzana) uye Middle East neNorth Africa (13 muzana). Latin America iri pachinzvimbo chechina ne11 muzana yehuwandu hwevasikana vachiri kuyaruka.
Sekureva kweUNICEF, michato yevana uye mibatanidzwa yekutanga mudunhu iri zvine hukama nehupamhi hwehunhumbu hwevachiri kuyaruka, yechipiri pasirese, nenjodzi yemhirizhonga pabonde, kuwedzera mukusaenzana kwevanhukadzi.
Zviitiko zvinobatana nevamwe vakawanda zvakaita sehurombo, tsika nemagariro, mabasa echikadzi nehukama, zvitendero uye zvipuka mumutemo wenyika.
'Mudunhu, kuenzana kwevasikana kunogumirwa nemhedzisiro yekuva amai vachiri vadiki, mhirizhonga uye mikana shoma yehupenyu. Hatigone kuchengeta maziso edu akavharika kune akarasika mukana uye kodzero dzakakanganikwa ', ndosaka kurudziro yekukurumidza yekumisa maitiro aya akadaro Perceval.